I-China i-75% yoTywala i-Disinfectant kwi-IBC / Drum mveliso kunye nabenzi | Zhongrong
Phantsi kwempembelelo ye-covid-19, i-75% ye-alcohol disinfectant iba yimfuneko yokhathalelo lwethu kubomi bethu bemihla ngemihla ngakumbi kwezinye iindawo zikawonke-wonke ezinje ngesikolo, isibhedlele, ivenkile enkulu, ihotele, njl. Njl. Le mveliso iqulethe i-75% yotywala enokubulala i-coronavirus kunye nezinye iintsholongwane ukukhusela impilo yethu ngokufanelekileyo.
Itekhnoloji ekhokelayo ye-ethanol e-China ngaphezulu kweminyaka engama-20
Phantsi kwempembelelo ye-covid-19, i-75% ye-alcohol disinfectant iba yimfuneko yokhathalelo lwethu kubomi bethu bemihla ngemihla ngakumbi kwezinye iindawo zikawonke-wonke ezinje ngesikolo, isibhedlele, ivenkile enkulu, ihotele, njl. Njl. Le mveliso iqulethe i-75% yotywala enokubulala i-coronavirus kunye nezinye iintsholongwane ukukhusela impilo yethu ngokufanelekileyo. Ipakethe yedrum / ye-IBC inezoqoqosho oluninzi, kunye nomthamo omkhulu, kunye nexabiso eliphakathi eliqhelekileyo kunenye ipakethi encinci, ungazigcwalisa kwipakethi encinci kwaye uzisebenzise. Njengoko sivelisa utywala obukrwada, ixabiso lethu liya kuba kukhuphiswano kwaye nomgangatho ophezulu. Ngapha koko, sidlule i-CE, i-FDA, kunye ne-ISO yokuqinisekisa. Sisungule uphawuI-TECH-BIO ukuyenza njengeNombolo 1 yohlobo lweemveliso ze-disinfection e-China njengoko sinemigangatho ephezulu yobutywala e-China. Siyinkokeli e-China kwitekhnoloji ye-ethanol. Sine-500,000 yendawo yokusebenzela yemitha kwiphondo laseHebei, China. Inkampani yethu yasekwa ngo-1999. Nangona kunjalo, sinako ukwamkela OEM & ODM kuzo zonke iintlobo yeentsholongwane utywala. Ukujonge phambili ekubeni liqabane lakho lehlabathi kwaye uzalisekise imeko yokuphumelela!
Umthamo womnatha: Ngama-200L / 1000L
Izinto eziluncedo: Utywala busekwe kwindawo ekhuselekileyo kwindalo esingqongileyo · Triclosan Simahla ·
Ubona: Ukunceda ukuphelisa iibhaktheriya kulusu okanye kumphezulu wezinto.
Isikhokelo: Beka nje izandla, ulusu oluqinileyo okanye umphezulu wezinto ngokubanzi, kwaye ugcine imizuzu eyi-1-3.
Izilumkiso: Ukusetyenziswa kwangaphandle kuphela · Izinto ezinokutsha · Gcina kude nobushushu nelangatye kugcine apho abantwana bangenakufikelela khona ∙ Kulumkela ukudibana nobuso, amehlo nolusu olaphukileyo.
Izithako ezingasebenziyoAmanzi acociweyo
Olunye ulwazi: Igcinwe kwindawo epholileyo neyomileyo etywiniweyo.
Intoni "eqhelekileyo” izinto ziyicoce? Ngaba iya kubulala i-corona?
Enkosi ngombuzo omkhulu! Siyasiqonda ngokupheleleyo ukuba kutheni ubuza lo mbuzo. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba i-FDA okwangoku ayizamkeli naziphi na iziyobisi, kubandakanya nezicoci zandla, ukunqanda okanye ukunyanga i-covid-19. Sithatha uxanduva lwethu lokuqinisekisa ukuba abathengi baya kumthombo ofanelekileyo wolu hlobo lolwazi, ezinye iingcali zaseTshayina sele zingqina ukuba i-75% yotywala inokungena kwisigqubuthelo se-covid-19 kwaye iqinise iprotein yayo ukuze ingasebenzi.
Molo, uyifumana njani impompo ukuba isebenze? Sisandula ukuthenga ibhotile kodwa sicinga ukuba impompo inokuba neziphene. Ngaba ikhona indlela ekhethekileyo yokwenza ukuba isebenze?
Enkosi ngokufikelela malunga ne-TECH-BIO 75% Utywala obubulala iintsholongwane! Zama ukucinezela phantsi kwimpompo ngomnwe wakho, impompo kufuneka ivele.
Singenza i-200L igubu okanye i-1000L IBC njengephakheji enkulu ye-75% yoTywala, kuya kuba kokulungeleyo ukuba abanye abasasazeli basasaze kwiiphakheji ezincinci.
Okulandelayo: 50ml 75% Utywala obuneentsholongwane TECH-BIO